Muchikamu chino tinotsanangura nzira yekuwana Big Sur pane yako Mac - uye zvaunofanira kuita usati wabaya bhatani rekuisa. Kugadziridza Mac yako kuri nyore, kwemahara uye kwete kungangoita sekudya nguva sezvawaimboita, asi pane zvinhu zvishoma zvatinokurudzira kuti utange gadzirira Mac yako. Tichakutungamira zvakare kupfuura angangove nemusoro uye chero matambudziko aungasangana nawo.
Kana zvinhu zvikanyatso kuomarara asi isu tinewo: Kugadziriswa kweMacs ayo asingazogadzirise macOS. Kana iwe uri mumwe wevanhu vazhinji vari kusangana nematambudziko kurodha pasi uye nekuisa Big Sur iwe uchazoda kutarisa kwedu mutungamiri kuti akunde matambudziko neiyo Big Sur kuisirwa.
Kana usati wagadziridza kuCatalina parizvino, verenga kuti uwane maitiro ekuvandudza kuCatalina kana Mojave kubva kuHigh Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, kana kunyange vhezheni yekare yeMac OS X pazasi.
Ziva kuti iwe unogona kuwana Big Sur (kana ramangwana macOS kugadzirisa) pakutanga na kujoina Apple-beta-kuyedza zvirongwa. Isu tinovhara izvi zvakadzama pano: Maitiro ekuwana iyo macOS beta.
Verenga zvakawanda pamusoro yazvino vhezheni ye macOS Big Sur.
Maitiro ekuwana macOS Big Sur pane yako Mac
Iyo yakazara uye yekupedzisira vhezheni yeMacOS Big ichave iripo kurodha pasi. Iyo nzira yekutora Big Sur pane Mac yako inoenderana neshanduro ye macOS yauri kushanda parizvino.
Kufungisisa kana iwe uchifanira kugadzirisa zvachose? Tarisa yedu macOS Big Sur ongororo yezano rakadzama, uye verenga kuenzanisa kwedu kwe macOS Big Sur vs Catalina kuti uone kuti inofananidzwa sei neshanduro yapfuura.
Iwe unogona kunetseka kuti une imwe software yaunoda kushandisa iyo isingashande mune nyowani yekushandisa system. Neraki pane nzira shoma dzaungayedze Big Sur usingabvise yekare vhezheni ye macOS kubva kuMac yako, tsvaga Maitiro ekumhanyisa macOS pane yekunze hard drive or Maitiro ekuita maviri-bhuti maviri Mac Anoshanda Maitiro pane yako Mac.
Kwidziridzo kubva kuCatalina kana Mojave
Kana iwe uine Mojave kana Catalina yakaiswa pane yako Mac iyo yekuvandudza ichauya kuburikidza neSoftware Kugadziridza. Iwe unogona kutoona chiziviso chekuti inogadziridza inowanikwa.
Vhura Sarudzo dzeSystem (unogona kudzvanya paApple logo mumenyu kuti uzviwane).
Dzvanya paSoftware Kugadziridza.
Komputa yako inoongorora zvekuvandudzwa, uye inoratidza kuti inogadziridza inowanikwa kune yako Mac. Dzvanya paKusimudzira Zvino kuti utore iyo yekumisikidza yeiyo nyowani vhezheni ye macOS.
Ipo iyo yekumisikidza iri kutorwa iwe unozogona kuramba uchishandisa Mac yako. Kana iyo yekumisikidza yodhaunirodha unogona kudzvanya kuti umise iyo nyowani vhezheni yeOS - asi chenjera kuti yako Mac ichave isingaite kwechinguva chidiki software painomisa.
Kwidziridzo kubva kuHigh Sierra kana kupfuura
Kana iwe uchimhanyisa High Sierra kana yekare vhezheni iwe uchafanirwa kuita zvinotevera:
Vhura iyo App Store pane yako Mac (tinya pane bhuruu icon ine chena A, kana tsvaga nekudzvanya nzvimbo + raira uye typing App Store).
Dzvanya paTora (shanduro dzekare dzeApp Store dzinogona kuve neDownload bhatani).
Zadza yako Apple ID ruzivo kana ukakumbirwa.
Iyo Installer ichatanga kurodha pasi, unogona kuona kuti zvinotora nguva yakareba sei kana ukatarisa kubhawa iri pasi peKutora.
Kana iyo yekumisikidza faira yatora pasi hwindo rinobuda paMac yako ichikuudza uye ichikumbira iwe kuti Uenderere… Iyo yekumisikidza faira inogona kuwanikwa muApplications (asi ichavhura otomatiki).
Neraki kurodha pasi kunoitika kumashure, kuti ugone kuenderera mberi nekushanda kana kusefa pawebhu.
Kufungisisa kwaungawana Big Sur paMac App Store? Unogona tora MacOS Big Sur pano.
Zvichatora nguva yakareba sei?
Patakatanga kurodha pasi Big Sur Mac yedu yakati zvaizotora maawa gumi kudhawunirodha iyo 10GB faira, saka gadzirira kumirira kwechinguva kunyanya kana uri pane isina kusimba Wi-Fi network. Iwe ungangoda kusiya yako Mac kurodha pasi iyo yekushandisa system yekuvandudza pamusoro pehusiku.
Uye izvo usati watombotanga kumisikidza panguva iyo iwe haungatombo kwanise kushandisa yako Mac. Tarisira izvi kutora kusvika paawa.
Iye zvino wave nemafaira ekumisikidza isu ticha tsanangura maitiro ekuisa Big Sur inotevera.
Maitiro ekuisa macOS Big Sur
Kamwe iyo inosimudza yadzora (sezvakatsanangurwa pamusoro) iwe wagadzirira kuisa macOS software pane yako Mac.
Kana iyo yekumisikidza faira yadzora iwe unofanirwa kuona hwindo rinobuda pane yako Mac ichikumbira iwe kuti utange iyo yekuisa maitiro.
Kana iwe wagadzirira kuisa, tinya pa Enderera (chenjera kuti zvinogona kutora nguva, saka pedzisa chero chinhu chisingakwanise kumirira usati waenderera mberi nekumisikidza).
Tevedza rairo rekrini kupedzisa kuisa software yekuvandudza, iyo inofanirwa kutora kutenderedza hafu yeawa kusvika paawa zvinoenderana nesarudzo yeMac yako.
Ingoitika kuti ukasangana nematambudziko, heino zvekuita kana yako Mac ikasununguka panguva yekumisikidza maitiro.
Maitiro ekugadzirira yako Mac kune OS yekuvandudza
Isu tinowanzo kurudzira kuti iwe usasvetukire mukati nekuisa software nyowani ipapo ipapo - yatinoreva kana Apple ikangoburitsa. Kunyangwe zviome sei bvunzo yeApple maitiro, pane zvinodzivirirwa nyaya nekutangisa kwekutanga. Uye kunyangwe kana pasina nyaya kazhinji maseva eApple anoremerwa sezvo munhu wese achimhanyisa kugadzirisa uye izvo zvinogona kunyatso kunonoka maitiro acho pasi. Saka isu tinokurudzira kuti ubate mabhiza ako uye uite kurongedza uye kugadzirira kutanga.
Zvisinei, pane zvinhu zvishoma zvakakodzera kuongorora usati watora shanduro itsva yeMac operating system chero nguva. Kana iwe ukamhanya nepazasi pekutanga iwe haugone kuve nezvinetso zvichitevera iyo yekuvandudza.
Heano matanho aunofanira kupfuura kana uchigadzirisa yako Mac kune yazvino vhezheni yemacOS. Isu tinogadzirisa nhanho imwe neimwe zvakadzama pazasi.
Tsvaga iyo vhezheni ye macOS iwe yaunoda.
Tarisa Mac yako inotsigirwa. (Verenga: Mac yangu anogona kuwana Big Sur?)
Ita shuwa kuti une nzvimbo yakakwana paMac yako. Iyo yekumisikidza faira yeBig Sur beta yaive 10GB!
Dzorera Mac yako.
Ita shuwa kuti Mac yako ine hutano.
Ita shuwa kuti uri pane yakavimbika network.
Gadziridza kune yazvino vhezheni yeyako yazvino macOS vhezheni.
Dhawunirodha macOS kubva kuMac App Store.
Isa macOS pane yako Mac.
Isu tinofukidza zvakare maitiro ekugadzirisa Mac yako neidzo diki diki kuhurongwa hwekushandisa hunoburitswa neApple gore rese pazasi pechinyorwa ichi: Kana ichingova gadziriso kune yazvino vhezheni yemacOS iwe unofanirwa kuisa svetukira kuchikamu chino. : Isa gadziriso kune macOS
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzirisa ako maapps pane yako Mac, verenga izvi: Maitiro ekugadzirisa ese ako Mac maapp.
Tsvaga iyo vhezheni ye macOS iwe yaunoda
Chinhu chekutanga chauchazoda kuita kutsvaga kuti ndeipi vhezheni yeMac inoshanda sisitimu yekuisa uye uve nechokwadi chekuti hapana chikonzero chekusachiisa. Tine ruzivo rwe yazvino vhezheni ye macOS Big Sur. Isuwo tine Zadza runyorwa rweMac OS X & macOS shanduro.
Kana iwe ukasarudza kumirira uye kurodha pasi vhezheni ye macOS mimwe mwedzi mushure mekutanga - kana kana iwe uri kutarisa kuvandudza Mac yako kune yekare vhezheni ye macOS - ziva kuti iyo vhezheni yaucharodha ichave yechinyakare vhezheni kupfuura yazvino yekuvandudza . Saka iwe unofanirwa kutarisira kuve nekugadzirisa iyo yekushandisa system zvakare kana iwe uchinge waisa iyo, asi izvi zvinofanirwa kuitika otomatiki.
Izvi zvinodaro nekuti Apple ichaenderera mberi kuburitsa inogadziridza kune anoshanda system mukati megore rose, kungave kugadzirisa kusagadzikana uye kugadzirisa matambudziko, asi dzimwe nguva kuwedzera maficha, senge emoji nyowani.
Zvino mukati memwedzi kubva munaJune kusvika Nyamavhuvhu kambani ichaburitsa beta vhezheni yeinotevera vhezheni yeanoshanda system software. Vamwe vanhu vanozokwanisa kuyedza beta kunze kwavo maMac.
Ita shuwa kuti une nzvimbo yakakwana
Apple inoratidza kuti iwe unofanirwa kuve ne20GB yemahara nzvimbo pane yako Mac's drive usati waisa nyowani vhezheni ye macOS - kunyangwe iwe ungangoda izvo zvakawanda.
Isu tinowanzokurudzira kuti iwe ugare uchiedza kuve ne10% yenzvimbo yakazara yeMac yako yemahara nguva dzese.
Kana iwe uchinge usipo inodiwa nzvimbo verenga izvi kuti uwane mamwe matipi ezvekubvisa. Maitiro ekuburitsa nzvimbo paMac, iwe unogona zvakare kuwana Maitiro ekudzima Mac Imwe yekuchengetedza inobatsira.
Ita shuwa kuti Mac yako ine hutano
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti Mac yako ine hutano zvakakwana usati waisa hombe yekuvandudza kune system.
Vhura Disk Utility (mu / Zvishandiso / Zvishandiso), sarudza yako yekutanga dhiraivha kubva pane yakanyorwa kuruboshwe, tinya iyo Yekubatsira tebhu kurudyi, wobva wadzvanya Verify. Kana Disk Utility ikawana matambudziko, iwe uchafanirwa kubhuya kubva kune rakasiyana vhorumu kuti uite iyo chaiyo yekugadzirisa uchishandisa iyo Refa Disk bhatani.
Bhatisa mumodi yekudzoreredza (nekubata pasi Command + R pakutanga) uye shandisa Disk Kubatsira kubva ipapo kuti uite kurudziro yakakurudzirwa.
Iwe unogona zvakare kumhanya iyo Apple Hardware Bvunzo (yeMacs akura kupfuura Chikumi 2013) kana Apple Kuongorora (yeMacs kubva munaJune 2013 kana gare gare). Ose miedzo anotarisa yako Mac kune zvimwe zvinhu zvehardware, senge yakaipa RAM.
Verenga zvakawanda pamusoro uchishandisa Disk Utility kugadzirisa Mac.
Usati waita chero hombe kuvandudza kuMac yako - uye kunyanya kana iwe uchiisa beta - iwe unofanirwa kutsigira Mac yako uye nekuita mamwe mabasa ekuchengetedza imba atichataura pazasi.
Neraki, Apple inoita kuti zvive nyore kutsigira Mac yako uchishandisa Time Machine, saka hapana chikonzero chekusagadzira Time Machine backup usati waisa vhezheni itsva ye macOS. Tine chinyorwa ichi nezve maitiro ekutsigira Mac yako uchishandisa Time Machine. Isu zvakare tine gwara rinomhanya nemabatiro aungaita tsigira Mac.
iCloud yakabatanidzwa zvakanyanya mune akawanda Apple maapplication uye system services. Ita shuwa kuti wapinda muICloud usati watanga kugadzirisa uye zvinhu zvinofanirwa kufamba mushe.
Ita shuwa kuti uri pane yakavimbika network
Isu tinokurudzira kuti iwe uve nechokwadi chekuti uri pane yakavimbika network - saka dzivisa kurodha pasi software mumahotera nemakamuri kana chero ruzhinji marwe network nekuti iwe hauzive izvo zvinogona kuvanda ipapo.
Kana iwe uchirodha pasi nekuisa software tinokukurudzira kuti uzviitire kumba, kubasa, kana kunzvimbo yako yekudzidzisa, kwete pahotera kana cafe network. Iwe ungangoona kurodha pasi kuri kukurumidza - uye kurodha pasi kumba kana zvinogona kureva kuti unogona kubaya Mac yako kunetiweki pane kuvimba neiyo isina waya yekumhanyisa mhanyisa (izvo zvinogona kureva kuti kurodha pasi kunotora nguva yakareba!)
Kuti uwane maitiro ekuchengeta yako Mac kuchengetedzeka kubva kudziviriro kunetseka verenga: Maitiro ekumisa yako iPhone, iPad kana Mac kuwana hacked uye vedu Mac ekuchengetedza matipi.
Gadziridza kune yazvino vhezheni yesoftware yako yese
Usati wasimudzira kune iyo nyowani vhezheni ye macOS, ita shuwa kuti iwe unoisa izvo zvazvino zvidzoreso kune vhezheni ye macOS yauri kuita parizvino. Nguva nenguva pachave nekugadziriswa kwesoftware kusimudzira kugadzikana, semuenzaniso, uye panogara paine mukana wekuti iwe ungave uine dambudziko rekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMac inoshanda sisitimu dai iwe usati watangisa-kuisa ino yakakosha yekuvandudza iyo yapfuura vhezheni, saka ita yako yepamba pekutanga.
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti iwe wakagadzirisa chero chechitatu bato maapplication zvakare. Izvo zvidzoreso zvinogona kusanganisira shanduko dzinodiwa kukwidziridzwa kune ichangoburwa macOS uye kana ukasamhanyisa iwo maratidziro anogona kusashanda nemazvo kana iwe uchinge wagadzirisa
Kuti uvandudze maapplication awakatenga kubva kuMac App Store, tangisa iyo App Store app uye tinya bhatani reKuvandudza mubara rekushandisa. Wobva wadzvanya Gadziridza Zvese, uchingopa yako Apple ID uye password kana uchikurudzirwa.
Yemaapplication aunotenga kumwe kunhu, iwe unozofanirwa kuisa nemaoko zvigadziriso. Unogona kutarisa kana paine zvigadziriso zviripo kubva kumenu yekushandisa, muMicrosoft Word, semuenzaniso, inyaya yekudzvanya paRubatsiro> Tarisa Zvekuvandudzwa.
Tarisa kuenderana neyako yechitatu-bato maapplication usati wagadzirisa macOS. Nenzira iyoyo iwe unenge uchisimuka uye uchimhanya nekukasira, pane kushushikana neako aunofarira maapplication uye ekuwedzera-ons asiri kushanda
Nezve ruzivo rwe maitiro ekuisa vhezheni yekuvandudza, svetukira kuchikamu chiri pamusoro.
Maitiro ekuisa macOS yekuvandudza muBig Sur, Catalina kana Mojave
Kuisa zvigadziriso kune macOS kana uchinge uchinge uchimhanyisa Big Sur, Catalina kana Mojave zvakatosiyana pane zvekare. Panzvimbo pekuvhura Mac App Store, iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Vhura Sarudzo dzeSystem
Dzvanya paSoftware Kugadziridza
Dzvanya kuti uvandudze software kana paine update
Neimwe nzira, tinya pane Apple logo mumenu bar uye sarudza Software Kwidziridza.
Maitiro ekuisa yekuvandudza kune macOS muHigh Sierra kana pakutanga
Kana iwe watove waisa iyo nyowani vhezheni ye macOS uye uchingoda kuisa yazvino yekuvandudza kune iyo software iwe unozviwana pasi peMac App Store inogadziridza tebhu.
Vhura iyo Mac App Store
Dzvanya Gadziridza padivi pechero zvigadziriso zvaunoda kuisa
Kana iyo software isati yatombotorwa (unogona kuiisa kuti uite izvi otomatiki) inozotora pasi kumashure
Kana software yacho yangotorwa pasi uchaona ziviso yekukuzivisa iwe kuti yagadzirira kuiswa
Mac yako inogona kukuzivisa iwe kuti ichatangazve usati waisa iyo yekuvandudza kana nguva yacho yakaipa iwe unogona kusarudza kudzosera kumashure kweawa, kana kusvika gare gare
Paunenge wagadzirira kuenderera, tinya Gadziridza zvakare uye mirira apo yako Mac inotangazve uye nekuisa iyo yekuvandudza
Mac yako ichavhara uye kumisikidza kunotanga - chenjera izvi zvinogona kutora nguva uye hapana yambiro kusvikira yatanga chaizvo, gadziriso ichangoburwa yakagadzirirwa kutora maminetsi makumi maviri nemana, asi usavhunduke - ingangove padhuze nemaminitsi gumi.
Kana kumisikidza kwapedza Mac yako ichatangazve.
Kuti uwane ruzivo nezve Apple mamiriro uye mamiriro ekushandisa macOS kuverenga: Iwe unofanirwa kubvumirana nemitemo nemamiriro eApple here?
Maitiro ekugadzira bootable USB macOS simaki
Maitiro ekuchenesa kuisa macOS Big Sur, Catalina kana mukuru
Maitiro ekuisa ekare shanduro dzeMacOS kana OS X
Maitiro ekuita kuti Mac yako igadzirire macOS Monterey